Kismaayo News » Oprah Winfrey oo lala xiriirinayo musharrax Madaxweyne Sanadka 2020-ka
Oprah Winfrey oo lala xiriirinayo musharrax Madaxweyne Sanadka 2020-ka
Kn: Oprah Winfrey ayaa si xoogan u danaynaysa in ay u tartanto xilka madaxtinimo ee Dalka Maraykanka sanadka 2020, kadib markii ay ka jeedisay khudbad balaadhan oo aad loola dhacay xafalada abaalmarinta xidigaha ee the “Golden Globes”
Inyar uun kadib markii ka jeedisay gabadhan 63 jirka ah oo ah ganacsato hantiile ah, magaalada Loss Angales ee Dalka maraykanka, khudbad aad uga hor imaansay kala sooca ku salaysan midbka iyo jinsiga ayaa waxaa islamrkiiba qabsaday baraha bulshada haashtaagyo ay kamid yihiin #Opraha2020.
Dad badan ayaa islamrkiiba lagarab istaagay taageero, Leslie Odom Jr oo ah jilaaiyohesaacaan ah oo u dhashaydalkamaraykanka ayaa kamid ahaa dadkii Winfarey baraha bulshada ku tageeray asago oo qoray “Way tartamaysaa maalin cusub ayaana jidka soo haysa.
Lakiin xafaladi waxaa winfrey ka sheegtay in aanu jirin wax qorsha ah oo ah in ay u tartanto aqalka cad, lakiin Stedman Garaham oo ah saxiibkeeda mudada fog ayaa waxaa uu u sheegay wargayska The Loss Angels Times in ayadu ay tartamayso. “Xaqiiqo ahaan way tartamaysaa, lakiin arintani waa mid u taala dadka” Garaham ayaa sidaasi ku waramay.
Maalinnimadii isniinta Talafihinka dalka maraykanka ee CNN ayaa sheegay in ay si buuxda uga fikirayso in ay tartanto. Qaar kamida saxiibaheeda dhaw ayaa sheegaya in dadka ayaada aadka ugu dhawi ay ku qalqaalinayaan in ayadu ay tartanto.
Soogalida madaxweyne Trump, madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda cusub aan wax khibrad ah u lahayn arimaha maamulka iyo kuwa militrigaba ee hadana ku guulaysta madaxwenenimada dalka maraykanka ayaa laga yaabaa in uu yahay arinka sahlaya in Winfrey ay tartanto.
Gabadhan caanka ah ee ah ganacsatada iyo xidigada warbaahineeda ayaa waligeed sheegi jirtay in ay aananay lahay musaqbal siyaasadeed.
Sidaasi oo kale waxaa ay u sheegtay warbaahinta the Blumberg News maalinimadii Axada in aanay doonayn in ay in ay tartanto.
Gayle King, saxiib dhaw oo ay leedahay Winfrey ayaa sheegay “Waxaan u qaatay qudbadani mid layaab leh, waxay naftayda ku ahayd mid soo booda ah.”
Shakhsiga ay xigatay CNN ayaa sheegay in wada sheekaysigii uu layeeshay Winfarey ilaa iyo bilo dhowr ah uusan ku jirin wax u tartamida aqalka cad ah.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Xidigadan lala xadhiidhiyo u tartamida aqalka cad ee maraykanka. Ayada oo lagu jiro tartankii doorasho ee layaabka lahaa ee 2016ka ayaa waxaa uu Trump sheegay in laga yaabo in Opraha Winfrey noqoto shakhsiga kula tartami doono xilika madaxtinimo, lakiin Winfrey waxaa doorshaadaasi taageertay Musharaxii xisbiga dimuquraadiga ee HillarryClinton.
Xiligii Xaflada waxaa arinkan sii buunbuuniyay Seth Meyers oo ah majaajilisteiyofalanqeeyesiyaasadeedoocaan ah asagaoosheegay in Winfarey ay leedahaymustaqbalsiyaasadeed, “Markiiaankukftamayxili fog mustaqbalkasiyaasadeedee Trump xiligiicashadaaanukulahaynaqalka cad, xasuusointee in laegayaydadkaugumuuqatay in aanu u qalminaqalka cad.”
“Qaarwaxaa ay waliqabaan in hadalkawaagaasiaanidhikeenay in Trump uukudhiiradoin utartamidaaqalka cad, Hadii ay taasi run ahaydhadawaxaaaandhahayaaWinfareywaligaamadaxweyne ma noqonaysid. Bal aanhadanaaragnosida ay wax iskubadalaan.”
Winfareywaxaa ay khudbadeedakagasheekeysayfarxadii ay dareentaykadibmarkii ay daawatayxafaladaabaalmarintaeeOskarkaeejilaagacaanka ah Sidney Poitier uuuguguulaystayaktarkauguwanaagsan. “waxaauuwataytaay cad lakiinkalarkiisuwaauumadoobaa, waligay ma aragninmadow ah oosidaasiloogudabaaldagayo.”
Sidookalewaxaa ay xafladeedakagasheekeysayRecy Taylor oo ah gabadhmadow ah oo ay kufsiiyojirdilugaysteen lix ninoocadaandagaalkii ay u gashay in ay cadaalad u raadisayadaiyodadkalamidka ah.
Winfrey waxaa ay khudbadeedakusheegtay in hadatahayxiligiisaxdaahaaeehablaha. “Xiligiiwaa la gaadhay, xiligiiwaalagaadhay, xiligiiwaalagaadhay,” ayaykhudbadeedakucelcelisay.